Anabolics Steroids ntụ ntụ usoro suppliers - AASraw ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids
Anabolic steroids ntụ ntụ, anabolic-androgenic steroid (AAS), bụ synthetic ọdịiche nke nwoke mmekọahụ hormone testosterone. Okwu kwesịrị ekwesị maka ogige ndị a bụ anabolic-androgenic steroid. "Anabolic" na-ezo aka na nkwonkwo akwara, na "androgenic" na-ezo aka na njirimara nwoke na nwanyị. Ufodu a na-achota maka uzo nke anabolic steroid bu Gear, Juice, Roids, and Stackers.
Ụfọdụ ndị na-eme ihe na-eme ka ụbụrụ Anabolic na-eme ka ahụ dị mma.
Ndị na-ahụ maka nlekọta ahụike nwere ike ịgwa ndị steroid ka ha na-emeso nsogbu hormonal, dịka igbu oge. Ndị na-agwọ ọrịa pụkwara ịgwọ ọrịa ndị na-akpata ọnyá ahụ, dị ka ọrịa cancer na ọrịa AIDS. Ma ụfọdụ ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu na-eji ọgwụ ndị a eme ihe iji mee ka ọ dịkwuo mma ma ọ bụ meziwanye ọdịdị ahụ ha.
Enwere ike ịme ihe ize ndụ ahụ site na iji ogologo oge mee ihe ma ọ bụ ọtụtụ doses nke AAS. Ihe ndị a na-agụnye mgbanwe ndị na-emerụ ahụ na ọkwa cholesterol (ụba lipoprotein dị ala ma belata lipoprotein dị elu), ihe otutu, ọbara mgbali elu, mmebi imeju (karịsịa ya na ọtụtụ AAS), na mgbanwe dị njọ na usoro nke ventricle ekpe nke obi. AAS nwere ike ịkpata ọnọdụ maka mmebi nke hormonal dị ka gynecomastia na ntinye nke testicular site na AAS. N'ime ụmụ nwanyị na ụmụntakịrị, AAS nwere ike ime ka ụmụ nwoke na-enweghị ike ịnabata ya.
Ergogenic na-eji AAS n'egwuregwu, ịgba ọsọ, na nkwonkwo ahụ dị ka ọgwụ ndị na-eme ka arụ ọrụ na-arụ ụka n'ihi mmejọ ha na ohere ha nwere inweta uru na-ezighị ezi na asọmpi nkịtị. A na-ekwu na ha na-egwu egwu ma machibidoro ya site na ọtụtụ isi egwuregwu. Ruo ọtụtụ afọ, AAS anọwo na-ahụkarị ihe ndị na-ahụ maka doping dị na ụlọ akwụkwọ na-arụ ọrụ na IOC. Na mba ebe AAS na-achịkwa bekee, a na-erekarị ahịa ojii ma ọ bụ ọbụna ọgwụ ọjọọ na-ere ndị ọrụ.
Ọtụtụ ndị ọrụ steroid abụghị ndị na-eme egwuregwu. N'etiti nde 1 na 3 nde mmadu (1% nke onu ogugu ndi mmadu) echere na ha eji AAS na United States. Nnyocha na United States egosila na ndị ọrụ AAS na-abụkarị ụmụ nwoke ndị nwoke na ụmụ nwoke na ụmụ nwoke nwere afọ iri na ụma banyere 25 bụ ndị na-adịghị ahụkebe onwe ha na ndị na-abụghị ndị na-eme egwuregwu na iji ọgwụ ọjọọ eme ihe. "N'etiti ụmụ 12 ruo ụmụaka 17, ojiji nke steroid na ọgwụ ndị yiri ya kwụsịrị 25 pasent site na 1999 ruo 2000, na 20 percent na-ekwu na ha na-eji ha eme ihe karịa egwuregwu, nchọpụta nke onye na-ahụ maka Blue Cross Blue Shield chọpụtara." (Eisenhauer) Ọmụmụ ihe ọzọ chọpụtara na iji nlekọta ahụike nke AAS n'etiti ụmụ akwụkwọ kọleji dị na ma ọ bụ na-erughị 1%. Dị ka nchọpụta e mere n'oge na-adịbeghị anya, 78.4% nke ndị ọrụ steroid bụ ndị na-adịghị ahụkebe na ndị na-abụghị ndị na-eme egwuregwu, ma banyere 13% kọrọ ihe ndị na-adịghị ize ndụ nke ịṅụ ọgwụ dị ka ịgbanye abịga, ịkụnye kọlụm, na ịhekọrịta vials multidose, ọ bụ ezie na nchọpụta 2007 chọpụtara na ịkekọrịta nkwụ nkwenye siri ike n'etiti ndị na-eji AAS maka nzube ndị na-abụghị nke ahụike, ihe na-erughị 1%. Nnyocha 2007 ọzọ na-achọpụta na 74% nke ndị ọrụ AAS ndị na-abụghị ndị na-agwọ ọrịa nwere ogo mmụta dị elu ma ndị ọzọ gụchara mahadum na ndị na-erughị afọ ole na-arụzu ụlọ akwụkwọ sekọndrị karịa ka a na-atụ anya ya n'aka ọha mmadụ. Otu nnyocha ahụ na-achọpụta na ndị mmadụ na-eji AAS maka nzube ndị na-abụghị ọgwụgwọ nwere ọnụ ọgụgụ dị elu nke ọrụ na ego dị elu karịa ụlọ mmadụ. Ndị ọrụ AAS na-achọpụta ọgwụ ndị ha na-ewere karịa ndị ọrụ ndị ọzọ na-achịkwa; Otú ọ dị, isi ihe ndị ọkachamara na-achọ ịjụ na-agụnye ndị enyi, akwụkwọ ọgụgụ ndị na-adịghị ahụike, ụlọ ọrụ ịntanetị, blọọgụ, na magazin ahụ dị mma, nke nwere ike ịnye ihe na-enyo enyo ma ọ bụ na-ezighị ezi.
Kedu ka ndị mmadụ si emejọ Anabolic steroids ntụ ntụ?
Ndị na-emetọ ụbụrụ Anabolic steroid na-ejikarị ekwu okwu ma ọ bụ tinye ha n'ime ahụ ike. Usoro a nwere ike ịbụ 10 ka oge 100 dị elu karịa usoro a chọrọ iji dozie ọnọdụ ahụike. A na-etinyekwa ọgwụ ndị dị na akpụkpọ anụ ahụ dịka ude, gel, ma ọ bụ nkwụsị.
Ụfọdụ ndị na-eme egwuregwu na ndị ọzọ na-emeso ndị na-eme ihe ike na-eme ihe ike kweere na ha nwere ike izere mmetụta ndị na-achọghị ma ọ bụ mekwuo mmetụta ọgwụ ọjọọ ahụ site n'ịme ha n'ụzọ ndị gụnyere:
eji ígwè na-ewere doses maka oge, na-akwụsị maka oge, wee malitegharịa
nchịkọta - ijikọta ụdị steroid abụọ ma ọ bụ karịa
pyramid-jiri nwayọọ nwayọọ na-amụba ugboro ugboro ma ọ bụ ugboro ugboro na-eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi, na-eru ọnụ ọgụgụ kacha elu, wee jiri nwayọọ nwayọọ na-agbapụ
Anabolic-androgenic steroid (AAS) bụ nsụgharị sụgharịrị nke hormone testosterone na-emekarị ma nwee ọgwụ eji eme ihe ziri ezi. Mgbe ndị ọkachamara na-ahụ maka ọgwụ na-elekọta ya, iwu Anabolic steroids dị ka ọgwụ dị mma ma ọgwụgwọ.
Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke iji ọgwụ ndị a eme ihe bụ n'etiti ndị na-arụ ọrụ na ndị na-eme egwuregwu iji mee ka ahụ ike ha ma ọ bụ ọdịdị ha dịkwuo mma. Mmegbu AAS siri ike na-eduga ná nsogbu ndị siri ike na mgbe ụfọdụ, na-enweghị ike imebi ahụike, gụnyere mgbawa oge mbụ, ọrịa strok, ịda mbà n'obi na omume mkpasu iwe siri ike.
Gbalịa iji AAS site na ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị na-ebute ezigbo mma AAS raw material, esi nri tablet / capsule ma ọ bụ mmanụ agbanyeghị n'okpuru mmanye siri ike ga-eme ka ọrịa gị ghara inwe nsogbu.
Na-egosi 1-8 nke 47 results
Nandrolone ntụ ntụ Usoro (8)
11-Ketotestosterone ntụ ntụ
Trenbolone Acetate (Tren ace) ntụ ntụ